सुन आयातको कोटा बढ्यो, अब विदेशबाट कती किलोसम्म ल्याउन पाइन्छ ? – ramechhapkhabar.com
सुन आयातको कोटा बढ्यो, अब विदेशबाट कती किलोसम्म ल्याउन पाइन्छ ?
विदेशबाट ल्याइने सुनको आयात कोटा बढेको छ । यसअघि १० किलो मात्रै ल्याउन पाइनेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बढाएर २० किलो बनाएको छ ।
बजारमा काँचो सुनको माग बढेको तर आपूर्ती हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकार समक्ष गुनासो गरेका थिए । सुन व्यवसायीहरुले सरकार र सरकारी निकायहरुमा सुन आयात कोटा बढाउन माग गरेसँगै राष्ट्र बैंकले कोटा बढाएको हो ।
त्यस्तै सुन व्यवसायीहरुले दैनिक ३० किलो सुनको माग गरेको भएपनि बजारको अस्थामा अनुसार २० किलोसम्म दैनिक आयात कोटा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कोटा घटाएपनि अझै कोटा बढाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए । लकडाउन अघि सामान्य समयमा दैनिक २० किलो र लगनको समयमा दैनिक २५ किलो सुन आउने गरेको थियो । तर, कोरोनाका कारण सुरु भएको लकडाउनपछि सुन आयत कोटा घटाइ १० किलो प्रतिदिनमा सिमित भएको थियो ।
मनकामना केवलकार डिजिटल प्रविधिमा स्तरोन्नति हुने
काठमाडौँ– मनकामना केवलकार डिजिटल प्रविधिमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। कम्पनीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केबुलकारको पुरानो संरचनालाई मर्मत गरेर नयाँ प्रविधि विकास गरी प्रविधियुक्त बनाउन विभिन्न चरणमा स्तरोन्नती गर्दै जाने जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार तत्काल अति आवश्यक र मर्मत गर्न नसकिने पार्टपुर्जाहरु फेरिने छन् भने दोस्रो चरणमा नयाँ प्रविधि मैत्री बनाउन पूर्वाधार तयार तथा केही अन्य थप पार्टपुर्जा फेर्ने र अन्तिम चरणमा एनालग प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिने छ।
तीन चरणमा काम गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने र २४ औँ वार्षिकत्सवमा नयाँ प्रविधिबाट संचालनमा ल्याउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।